Izimbangi Zakho Zisebenza Ngeqhinga Le-IoT Elizokungcwaba | Martech Zone
Inani lamadivayisi axhumeke kwi-Inthanethi ekhaya nasehhovisi lami liyaqhubeka nokukhula njalo ngenyanga eyodwa. Zonke izinto esinazo njengamanje zinezinhloso ezisobala - njengokulawula ukukhanya, imiyalo yezwi, nama-thermostat ahlelwe kahle. Kodwa-ke, ukuqhubeka kwe-miniaturisation kwezobuchwepheshe nokuxhuma kwabo kuletha ukuphazamiseka kwebhizinisi njengoba singakaze sikubone ngaphambili.
Muva nje, ngithunyelwe ikhophi ye- I-Intanethi Yezinto: Digitize noma Die: Shintsha inhlangano yakho. Yamukela ukuvela kwedijithali. Phakama ngaphezu komncintiswano, incwadi kaNicolas Windpassinger. UNicolas uyiPhini Likamongameli Wezwe Uhlelo lukazakwabo lukaSchneider Electric lwe-EcoXpert ™, Umsebenzi wawo ukuxhuma ubuchwepheshe nobuchwepheshe babahlinzeki bezobuchwepheshe abahamba phambili emhlabeni, ukuphayona ikusasa lezakhiwo ezihlakaniphile kanye Inthanethi Things, nokuletha izinsizakalo ezihlakaniphile, ezihlanganisiwe nezisebenza kahle nezixazululo kumakhasimende.
Njengoba le ncwadi elusizo ichaza, umhlaba ophilayo uyenziwa uphile - uba nokuhlakanipha futhi uxhumeke. Empeleni, impendulo yisiqalo sohambo lwakho: imfundo. Funda ngeBlockchain ne-Artificial Intelligence njengoba zizoshintsha umhlaba. Isinyathelo sakho esilandelayo empeleni amakhasi ambalwa ngaphambili; baphendule baqonde imithetho ye-IoT yomdlalo futhi bafunde ukuthi ungayisebenzisa kanjani ukuze uzuze. UDon Tapscott, Umbhali Wikinomics
UNicolas akagcini ngokukhuluma nethuba le- IoT, ukhuluma ngokuningiliziwe ukuthi ibhizinisi elijwayelekile elingenawo umkhawulo wobuchwepheshe lingaguqulwa kanjani ngamasu e-IoT. Sonke sifunde ngamadivayisi wezokwelapha, ezenzekelayo zasekhaya, namandla ... kepha kuthiwani ngezinto ongeke ucabange ngazo. Nazi izibonelo ezimbalwa engizitholile:
Ithebula lePanasonic Smart
Kunzima ukukholelwa ukuthi uzothenga itafula ngokuzayo ngamakhono we-IoT… kepha ngemuva kokubuka le vidiyo, uzoshintsha umqondo wakho.
Umcamelo we-ZEEQ Smart
Ubani owake wacabanga ngomcamelo oxhunyiwe - ngesipikha se-bluetooth, ukuqapha i-snore, nokuhlaziywa kokulala. Kulapha…
Izinzwa Zokukhiqiza Ubhiya
Uma ungumuntu ophisa utshwala, ungayiqapha kanjani kangcono inqubo yokwenza utshwala ukuqinisekisa ukungaguquguquki nokulawula?
Iqiniso ngukuthi i-IoT izotholakala kuyo yonke imikhiqizo nezinsizakalo ngokuzayo. UNicolas'Incwadi iyipulani yezinkampani zokubuyekeza imikhiqizo nezinsizakalo zazo ukunquma ukuthi ukutshalwa kwezimali kuzinto ezintsha ze-IoT kuzoliguqula kanjani ibhizinisi labo. Futhi konke kuqala ngekhasimende lakho.
Digitize noma Die isetshenziswa ngabenzi bezinqumo abaphambili bebhizinisi ukwenza amasu abo, iphothifoliyo, imodeli yebhizinisi nenhlangano. Le ncwadi ichaza ukuthi yini i-IoT, imithelela yayo nemiphumela yayo, nokuthi ungayisebenzisa kanjani inguquko yedijithali ukuze izuze wena. Ngaphakathi kwencwadi, uzofunda:
Lokho okushiwo yi-IoT kuwo wonke amabhizinisi
Kungani i-IoT nokuguqulwa kwedijithali kuyingozi kumodeli yebhizinisi lakho nokusinda kwakho
Okudingayo ukukuqonda ukuqonda kangcono inkinga
IoT⁴ Strategic Methodology - Izinyathelo ezine inkampani yakho okudingeka ziyilandele ukuguqula ukusebenza kwayo ukuze iphile
I-IoT izophazamisa wonke amabhizinisi, kufakwe abaholi bawo, futhi ungalusebenzisa ngokugcwele lolu shintsho ukuze uzuze. IoT isivele iguqula izimakethe nezinkampani eziningi. Ukwenza umqondo walezi zinguquko, futhi okubaluleke kakhulu, ukuqonda ukuthi ungazisebenzisa kanjani ukuze zikhule ikhanda namahlombe ngaphezu komncintiswano wakho kungenye yezinjongo zale ncwadi.
Thenga Incwadi - Digitize noma Die
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokusebenzisana se-Amazon kulokhu okuthunyelwe.
Tags: ukuziphendukela kwedijithaliukudijithali noma ukufaUDon Tapscottinternet sezintoIotUNicolas WindpassingerUhlelo lukaSchneider Electric lwe-EcoXpert PartnerWikinomics
I-Netflix Iyandisa Kanjani Ukuzibandakanya KweKhasimende Kusetshenziswa Idatha Enkulu